Umntwana akafuni ukufunda indlela yokumnceda?
Ngoku ixesha elide ngoku liyaziwa ukuba abantwana besikolo abanamabanga aphantsi (kuwo wonke umhlaba) babenqabile ukuba babonakalisa inzondelelo kwiiseshoni zoqeqesho. Unokwenene, uyazijezisa ngenxa yoko, utsho "ezinye izigwebo", uqhube iingxoxo ezinonophelo kunye nabazali - akunakukunceda. Njani ukuba? Icebo: zama ukuphulaphula ingcebiso ebalulekileyo yabanenkwenkwezi. Umntwana akafuni ukufunda indlela yokumnceda ngayo - yonke into ekhoyo kwinqaku lethu.
Mercury i khuthaza
Ngeenkwenkwezi, i-Mercury ithathwa njengeplanethi yolwazi. Ukongeza kwimiba ephakamileyo yengqondo, yena, ngokuthetha ngomfuziselo, ulawula intetho yethu, ebaluleke kakhulu kwinkqubo yokufundisa. Isiphetho sokuqala: libale zonke iintlobo zokusongela umntwana wakho-umfundi omncinci. Kubonakala ngathi ukuba awuwenzi umsebenzi wakho wesikolo, awuyi kuba khona nanamhlanje. Indoda encinane iya kukhubeka nje. Kwaye izifundo aziyi kukulungiselela, kwaye ekhaya kuze kube sebusuku zihlala i-beech. Oku kwamkelekanga. Isiphephelo sakho sesibini: ngokukhawuleza kwaye ngokuhambelana nengqiqo yengqondo yomntwana (i-Mercury idinga) ukumqinisekisa ukuba ukufunyanwa kwansuku zonke kolwazi, ukuqonda okunzulu imfihlelo yehlabathi elijikelezayo-ezi zizinto ezikhangayo. Ekugqibeleni, ezininzi iintlobo zezenzululwazi onayo, unomdla ngakumbi kunoma yimuphi na uluntu, ngokugqithiseleyo uya kuba nako ukukhetha uqeqesho. Kuya kufuneka ukuba utshintshe ngaphandle kweengxaki.
Ehlabathini, yonke into inamandla. Akukho nto imiyo: ihamba. Yingakho iingxoxo zakho ezingabonakaliyo kunye nomntwana osemncinane wesikolo kufuneka zihlale zihluka. Vumelana, ukuba yonke imihla iphinde iphinde iphinde iphinde iphindwe ngumntwana onobubele malunga nolwimi oluqhelekileyo oluqhelekileyo, aluqondwanga. Njengoko bathetha, kwindlebe enye yawela ngaphakathi, kwelinye i-flew. Kutheni? Yaye iyaxhamla. Ngoko ke, oomama kunye noodade kufuneka bafunde ukutshintsha ugxininiso lwabo lobuqili (njengobunzima, nangona kungenjalo) lufuna. Ngaloo ngqiqo kubalulekile ukunyamekela "ukuziphatha" kwentsuku yethu.
Ilanga liya kuthiwa
Ukunyakaza kwelanga (kubonwa kuMhlaba) kubangela utshintsho oluthile kwilizwe lethu. Yaye kungekhona ngokukhawuleza, kodwa ukusuka kwinyanga ukuya kwinyanga. Ngokomzekelo, malunga neentsuku ezingama-30 inkwenkwezi inomqondiso omnye we-Zodiac. Emva koko udlulela kwisiqalo esilandelayo, ngoku ngendlela eyahlukileyo echaphazela ukuqonda komntu. Ngamanye amazwi, yintoni eyenzekayo izolo, xa ilanga lihlala e-Aries, namhlanje lusele lingaba luleke, njengoko i-luminari iphenduka ibe ngumqondiso weTaurus. Unayo imithetho yakhe yokuziphatha. Khumbula: ukwazi imihla yokungena kwelanga kwiimpawu ze Zodiac kunye neempawu zabo eziphambili, sinokuzixela kwangaphambili ukuba iziphakamiso eziza kuthi zichaphazele ngakumbi abantwana.
Ekuqaleni komnyaka wezemfundo, ilanga lisesigxina seNtombikazi (ukususela ngomhla wama-23 ukuya ku-24 ukuya ku-23 ukuya ku-Septemba ukuya ku-Septemba), ngoko ke ngamaxesha anjalo abantwana bahlala bevuyiswa ukuva: "Awuyiziqulatho ngokusesikweni sethu, kwaye unokufunda okusemandleni eklasini" . Kwaye ukhumbule iVirgin - uphawu lwezakhono eziphezulu zeengqondo. Ngabo kwaye kufuneka ngokuthe ngcembe bathethe nabantwana besikolo lonke ixesha. Kwaye ngokukhawuleza kukho inkqubela yenkqubela phambili, ukuba ayibonakali nantoni na. Kodwa kukho konke apha. Umntwana uya kuqonda. Inyanga ezayo (ukususela ngoSeptemba 23 ukuya ku-Oktobha 23-24), ilanga liya kuba eLibra. Kule meko, kuninzi kuncedo ukuthetha ukuba kunoma yintoni na imeko iyakwazi ukuphuma nekhanda eliziqhenyayo, ngenxa yemfundo enhle kakhulu. Kunzima ukungazi, kodwa kuthi konke into. Ngenxa yokuba siyazi: ayikho imeko engathembekiyo. Akunabo bonke abantu abazi indlela yokuphuma. Yazi, ungafundanga kakuhle.
Ukususela ngo-Oktobha 23 ukuya kuNovemba 22-23 kubalulekile ukuphawula kumntwana ukuba iingubo ezininzi (ezingaphendululwayo) zehlabathi lethu zinokufunyanwa kuphela kwimfundo, kuba ngelo xesha i-Sun iyisibonakaliso seemfihlelo kunye nobuxoki: i-Scorpio. Zive ukhululekile ukujamelana nemisebenzi kunye nokuvezwa kwezi zihloko apho umntwana wakho angathanda ukukuqonda kangcono. Ngexesha elifanayo, xelele ngomntwana umntwana ngobumnene: ukuba wayeyingozi kakhulu ngemisebenzi yesikolo, ngoku uya kuba nengcamango ecacileyo yento ehlala eyimfihlelo. NgoNovemba-Disemba (ukususela ngo-22 ukuya ku-22 ukuya ku-23 ukuya kwe-23 ukuya kweye-23 ukuya ku-23 ukuya kwe-23 ukuya kweye-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kwe-23 ukuya kweye-23. Ngendlela, ngexesha elifanelekileyo kufanelekile ukuxelela umzekeliso malunga nokuba umntwana othile wesikolo ophupha ukuba yindoda enkulu wayedla ngokukhawuleza, kwaye, emva koko, wayekwazi ukuqonda kuphela umsebenzi we-janitor.
Ziimpawu zohlobo lwebusika
Emngceleni wonyaka (ukususela ngoDisemba 22-23 ukuya kuJanuwari 20-21), inzala ekufundeni inokuphuhliswa ngumzekelo wabantu obuvelele abaphumelele ebomini. Ngeli xesha, kuyafaneleka ukuthetha malunga nokuqhubeka ngokuphakamisa izinga lezemfundo, umzekelo, izihlobo zakho okanye abantu abadumileyo. Qaphela: ngoku i-Sun iCapricorn, kwaye oku kuwuphawu lokuphikelela, ukunyamezela. Ngenxa yoko, ngokubhekisela kwimbali ethile (ngaphandle kwee-Albert Einstein kathathu), kwakhona ukhumbuze abantwana ukuba i-spark yeyiphi na italente iqala ukuphuma esikolweni. Into ephambili kukufunda ngokunyanisekileyo, kwaye ke umlilo womnatha uya kukhanyisa indlela yokuphila.
NgoJanuwari-Februwari (ukususela ngomhla wama-20 ukuya ku-19 ukuya ku-20 ukuya kwe-20 ukuya kweye-20 ukuya kweye-20 ukuya kweye-20 ukuya kweye-20 ukuya kweye-20 ukuya kweye-20). Ngoku lixesha lokuza neengxabano ezintsha malunga nokufunda okunamandla kwaye okunamandla. Khumbula ukuba uphawu lwe-Aquarius ludibaniswa kunye nokuzilibazisa, ngoko ke izinto zokuzilibazisa (phantse bonke abantwana) zomntwana wakho zingaba ngumphambili wamatshini ekuvuseleleni umdla kwintlalo ehlukahlukeneyo. Kwaye kulungile ukuxelela umfundi ukuba nangona umdlalo wakhe ufuna ulwazi oluthile. Ngendlela, xa ilanga lingena kumqondiso wePisces (ngoFebhuwari 19-20), zama ukuthetha nentliziyo yengane ngentliziyo malunga nendawo efanelekileyo yolwazi olukhanga kakhulu. Iintlanzi zibonakalisa uluntu, uvelwano. Vumela umntwana wesikolo aphulaphule ilizwi "langaphakathi", intuition yakhe, aze athi izinto afuna ukuziqwalasela ngakumbi.
Ukususela ngomhla wama-20 ukuya ku-21 kuMatshi ukuya ku-20 ukuya kwe-21 ku-Epreli kwi-Sun e-Aries Lo ngumqondiso wobuntu obunamandla, intando engavumelekanga. Ngenxa yoko ngoku kuyimfuneko ukuba angachazi kumfundi ukuba kuyimfuneko yokufumana imfundo epheleleyo, ubuninzi bokuzama kunye naye ukucacisa (kwakhona kwakhona ukucacisa) iminqweno yakhe. Kodwa ukuba kwinyanga edlulileyo ukuba umama nabazali babe neendlela ezibonakalayo kumbuzo, ngoku kulungele ukuguqula umnqweno womntwana, ukufumanisa ukuba yintoni eyona nto eya kumnceda ukuba abe namandla. Khumbula, ixesha le-Aries lisoloko lubangele ininzi yabantwana ukuba bafune ukukhawuleza, ubuntu obubonakalayo. Ewe, ncedisa umntwana wakho ukuba afumane into ayifunayo kangcono kunabanye abafundi eklasini. Futhi ungamvumeli ukukholisa umntwana wesikolo ukuba ubuchule bakhe obuphambili abubonakali, kungekhona kwizinwele, i-suit okanye indlela yokuziphatha, kodwa kuphela kwizakhono zengqondo, i-erudition, ne-erudition. Makhe acinge ngeendlela zokubetha ngokukhawuleza ezinokuhamba ngokukhawuleza.
Ngo-Apreli-Meyi (ukususela ngomhla wama-20 ukuya ku-21 ukuya ku-21-22) i-Sun eTaurus. Uwuphawu lobutyebi. Ngoko ke, kubalulekile ukugxila kwizinto eziphathekayo kumbandela, uthi abantu abangafanelekanga, oko ke, abangazange bafumane imfundo engcali, ukuba bayifake ngokuthobeka, abahlali baphumelele kwaye bahluphekile. Qinisekisa umntwana ukuba umntu ufikeleleke kwiindawo ezikhethekileyo ezihlawulelwayo kuphela ngokufunda ngokuzikhandla. Ekupheleni kukaMeyi, abazali bafumana ingxaki entsha: abafundi abagqithanga esikolweni, baneenyanga ezintathu zeholide ezilindele ixesha elide phambi kwazo.
"Ndandichitha njani eli hlotyeni"
Ngaba kulungele ukukholisa nokwenza abantwana bathathe inxaxheba ekuphindaphindiweyo kwezinto ezifakwe kwinqanaba lonyaka? Emva koko, ihlobo likhulu kakhulu ukuphumla! Kwaye kuyimfuneko ukuzama. Ngaphezu koko, ngeenyanga ezintathu zasehlotyeni ilanga liya kuba sezantsi kweZodiac - kwindawo yokuqokelela ulwazi. Ngamanye amagama, ixesha lehlobo, liphuma, lixesha elifanelekileyo lokufunda, xa ulwazi lugxininiswe ngokuqinile entloko yomfundi. Zama ukunceda umntwana wakho afunde oko kunikwe into embi kakhulu. Ehlotyeni, ngakumbi ukususela ngoJuni 21 ukuya kuJulayi 23-24, xa ilanga liseCanscer, kuyakunceda ukusebenza kumqeqeshi womfundi, ukufunda iimbongo kuye, ukufunda iincwadi kunye.
Iiphoso zomzali ekuzalaneni
Iingcebiso zengqondo: abazali baqhawule, kwaye umntwana okhulayo waba ngumdla
Ukuphuhliswa kwengqondo yomntwana ukusuka kwiminyaka emi-2 ukuya kweyesi-3
Imfundo yothando kwendalo kwintlekele yabantwana
Yiphi ibhodlo yokukhetha umntwana?
Intombi kaYise: Uthando lukabawo
Unyango lweendlela zokunyumba zabantu
IHoroscope ngoDisemba 2017 - iCapricorn yowesifazane - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Imikhwa emibi yabantu
IHoroscope yeNtombikazikazi ngoMatshi 2017
Ukukhanda ngeenwele: iintlobo kunye nobuchwepheshe
Amava amaninzi ngexesha lokukhulelwa
Ubunjani ubuso obushushu be-ultrasonic
Indlela yokuxelela abantwana ngoThixo
Unyaka omtsha wobugqi: ukuyibhiyozela ngayo indoda?
Isidlo kunye nenkomo kunye ne-mash
Ngaba ndinako ukuthoba amanqatha?